ဒီတစ်ခါတော့ ကာဆာနိုရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က အတည်ဖြစ်ပြီလား
ဘောလုံးသမားဘ၀ကနေ တတိယအကြိမ်မြောက် အနားယူခဲ့ပြန်တဲ့ ကာဆာနို Antonio Cassano
13 Oct 2018 . 9:27 PM
အီတလီဝါရင့် တိုက်စစ်ကစားသမား ကာဆာနို Antonio Cassano ဟာ ဘောလုံးလောကထဲ ပြန်ဝင်ပြီး (၇)ရက်အကြာမှာပဲ ဘောလုံးသမားဘ၀ကနေ ပြန်အနားယူဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ အသက်(၃၆)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ရိုးမား၊ ရီးယဲလ်၊ အင်တာမီလန်နဲ့ အေစီမီလန် ကစားသမားဟောင်း ကာဆာနိုဟာ စီးရီး C ကလပ် Virtus Entella အသင်းနဲ့ စာချပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး အသင်းနဲ့အတူ လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းခဲ့ပေမယ့် (၇)ရက်အကြာမှာပဲ အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင် ဘောလုံးသမားဘ၀က အနားယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကာဆာနိုက “ဘောလုံးသမားဘ၀က အနားယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချရမယ့်ရက်က ရောက်ရှိလာပါပြီ။ Virtus Entella အသင်းနဲ့အတူ လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းခဲ့တဲ့ ရက်တွေမှာ သိလိုက်တာက ကျွန်တော်ဟာ နေ့တိုင်း လျေ့ကင့်ခန်း ပုံမှန်ဆင်းဖို့အတွက် စိတ်ထက်သန်မှု မရှိတော့ဘူးဆိုတာပါ။ ဘောလုံးကစားမယ်ဆိုရင် အရည်အသွေး၊ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေ လိုအပ်ပြီး အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော့်အတွက် တခြားဦးစားပေးရမယ့် ကိစ္စတွေ ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်” လို့ ပြောကြားခဲ့တယ်။ ကာဆာနိုဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တုန်းက ဗီရိုနာအသင်းနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး ရက်ပိုင်းအကြာမှာပဲ ဘောလုံးသမားဘ၀ကနေ ပထမဆုံးအကြိမ် အနားယူခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သူ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြင်ဆင်ပြီး ဗီရိုနာမှာ ပြန်ကစားခဲ့သလို ရာသီကြိုခြေစမ်းပွဲ(၂)ပွဲ ကစားအပြီးမှာ ဘောလုံးသမားဘ၀က အနားယူပြီလို့ ဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။ အခုလည်း Virtus Entella နဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုအပြီး ရက်ပိုင်းအကြာမှာပဲ ဘောလုံးသမားဘ၀က အနားယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကာဆာနိုဟာ ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် စိတ်လိုက်မာန်ပါ လုပ်ရပ်တွေကြောင့် နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားခဲ့ပြီး အခု သူ့ဆုံးဖြတ်ချက် တကယ်အတည်လား၊ ဒါမှမဟုတ် ပြန်ပြောင်းဦးမလားဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ.။
Photo:Gianluca Di Marzio,Firenews
ဘောလုံးသမားဘဝကနေ တတိယအကွိမျမွောကျ အနားယူခဲ့ပွနျတဲ့ ကာဆာနို Antonio Cassano
အီတလီဝါရငျ့ တိုကျစဈကစားသမား ကာဆာနို Antonio Cassano ဟာ ဘောလုံးလောကထဲ ပွနျဝငျပွီး (၇)ရကျအကွာမှာပဲ ဘောလုံးသမားဘဝကနေ ပွနျအနားယူဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျပါပွီ။ အသကျ(၃၆)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈတဲ့ ရိုးမား၊ ရီးယဲလျ၊ အငျတာမီလနျနဲ့ အစေီမီလနျ ကစားသမားဟောငျး ကာဆာနိုဟာ စီးရီး C ကလပျ Virtus Entella အသငျးနဲ့ စာခပျြခြုပျဆိုခဲ့ပွီး အသငျးနဲ့အတူ လကေ့ငျြ့ခနျးဆငျးခဲ့ပမေယျ့ (၇)ရကျအကွာမှာပဲ အံ့အားသငျ့စရာကောငျးလောကျအောငျ ဘောလုံးသမားဘဝက အနားယူခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ကာဆာနိုက “ဘောလုံးသမားဘဝက အနားယူဖို့ ဆုံးဖွတျခကျြ ခရြမယျ့ရကျက ရောကျရှိလာပါပွီ။ Virtus Entella အသငျးနဲ့အတူ လကေ့ငျြ့ခနျးဆငျးခဲ့တဲ့ ရကျတှမှော သိလိုကျတာက ကြှနျတျောဟာ နတေို့ငျး လေ့ကြငျ့ခနျး ပုံမှနျဆငျးဖို့အတှကျ စိတျထကျသနျမှု မရှိတော့ဘူးဆိုတာပါ။ ဘောလုံးကစားမယျဆိုရငျ အရညျအသှေး၊ စိတျအားထကျသနျမှုတှေ လိုအပျပွီး အခုအခြိနျမှာ ကြှနျတေျာ့အတှကျ တခွားဦးစားပေးရမယျ့ ကိစ်စတှေ ရှိနပွေီဖွဈပါတယျ” လို့ ပွောကွားခဲ့တယျ။ ကာဆာနိုဟာ ၂၀၁၇ ခုနှဈတုနျးက ဗီရိုနာအသငျးနဲ့ စာခြုပျခြုပျဆိုပွီး ရကျပိုငျးအကွာမှာပဲ ဘောလုံးသမားဘဝကနေ ပထမဆုံးအကွိမျ အနားယူခဲ့ပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာ သူ့ ဆုံးဖွတျခကျြကို ပွငျဆငျပွီး ဗီရိုနာမှာ ပွနျကစားခဲ့သလို ရာသီကွိုခွစေမျးပှဲ(၂)ပှဲ ကစားအပွီးမှာ ဘောလုံးသမားဘဝက အနားယူပွီလို့ ဆိုခဲ့ပွနျပါတယျ။ အခုလညျး Virtus Entella နဲ့ စာခြုပျခြုပျဆိုအပွီး ရကျပိုငျးအကွာမှာပဲ ဘောလုံးသမားဘဝက အနားယူဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။ ကာဆာနိုဟာ ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ စိတျလိုကျမာနျပါ လုပျရပျတှကွေောငျ့ နာမညျဆိုးနဲ့ ကြျောကွားခဲ့ပွီး အခု သူ့ဆုံးဖွတျခကျြ တကယျအတညျလား၊ ဒါမှမဟုတျ ပွနျပွောငျးဦးမလားဆိုတာတော့ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ.။
by Ko Kyue . 58 mins ago